Bahamas họpụtara I. Chester Cooper ka ọ bụrụ Minista njem nlegharị anya ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas họpụtara I. Chester Cooper ka ọ bụrụ Minista njem nlegharị anya ọhụrụ
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye ọhụrụ Bahamas Minister of Tourism and Aviation
Ndị isi na ndị ọrụ nke Bahamas Ministry of Tourism & Aviation nabatara osote onye isi ala, Honorable I. Chester Cooper, onye a họpụtara ka ọ bụrụ Minista njem, itinye ego na ụgbọ elu na Septemba 17, otu ụbọchị mgbe ntuli aka nke mba ahụ gasịrị. Nhọpụta kabinet nke DPM Cooper so na Pọtụfoliyo mbụ nke nchịkwa ọhụrụ nke Progressive Liberal Party nyere, onye buru mmeri na ntuli aka ahụ na Septemba 16, 2021.
Ọnọdụ azụmahịa mba ụwa dị oke mkpa maka mgbasawanye adigide nke ngalaba Bahamas 'Tourism, Aviation and Investments.
Ike Minista Cooper na ọmarịcha azụmaahịa ya bụ ihe achọrọ ka Ministri ahụ na -aga n'ihu na mgbake njem.
Maazị Cooper na -ewere okpu agha ahụ na nnukwu nghọta banyere nnukwu ọrụ dị n'ihu.
Onye isi Director njem nlegharị anya Joy Jibrilu kwuru, sị: “Anyị na Ministry of Tourism na -atụ anya ịnụ ọkụ n'obi ịrụ ọrụ n'okpuru idu ndú ọhụrụ nke Minista Cooper, onye ga -ewetara Ministri anyị akụ na ụba nke ihe ọmụma na ahụmịhe o nwetara site na ndụ ya niile dị ka ihe ịga nke ọma. onye ndu na ụlọ ọrụ nkeonwe. Ike Minista Cooper na ọmarịcha azụmaahịa ya bụ ihe achọrọ ka ozi anyị na -aga n'ihu na mgbake maka njem nlegharị anya n'etiti ọrịa na -aga n'ihu. ”
Minista Cooper kwetara na isi azụmaahịa niile dị na ya Bahamas Ọ bụ ndị mba ụwa na -akwalite ya na nghọta nke ọnọdụ azụmaahịa mba ofesi dị oke mkpa maka mgbasawanye na -adigide nke Bahamas 'Tourism, Ngalaba ụgbọ elu na ntinye ego. Dị ka onye nwetaworo nnukwu ihe ịga nke ọma na onye isi ụlọ ọrụ nkeonwe, Maazị Cooper na -ebute isi azụmaahịa nke mba ahụ na nnukwu mmata banyere nnukwu ọrụ dị n'ihu. Ọ na -ewepụta ohere iji bulie ihe ịma aka ahụ n'ije ozi obodo ya ọ hụrụ n'anya.
Minista Cooper bụ ọdụdụ nwa n'ime afọ iri na abụọ ma lụọ Cecelia Cooper. Ha bụ nne na nna dị mpako nke nwere ụmụ atọ.
Mgbalị ndị mbụ o mere kpaliri ya inwe obi ike, iguzosi ike na ịdị umeala n'obi; agwa ndị jeere ya ozi nke ọma ka ọ rịgoro n'ọkwa ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ onye isi oche & onye isi BAF Global Group na Onye isi ala & onye isi BAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd.
Ọ bụ onye isi oche mbụ nke Kọmitii Ndụmọdụ mkpuchi na onye isi guzobere Bahamas Venture Fund. Ọ bụ onye otu Young Presidents Organisation (YPO), onye Toastmaster na -akwanyere ùgwù ma na -eje ozi na bọọdụ ngalaba dị iche iche.
Onye osote onye isi ala Chester Cooper bụ osote onye isi otu Progressive Liberal Party (PLP) na onye otu omeiwu maka mpaghara Exumas na Ragged Island.